I-OPTISMILE INC. IMIGOMO NEZIMISO NENQUBOMGOMO YOKUBUYISELA - Odokotela bamazinyo baseKapa, ​​Isilinganiso Esiphakeme Kakhulu se-Google, Isevisi Yokuzitika
Incazelo eningiliziwe yezimpahla kanye / noma izinsizakalo
I-OptiSmile Inc. ibhizinisi embonini yamazinyo enikezela ngezinsizakalo zezempilo namazinyo.
Iwebhusayithi iqhutshwa yi-OptiSmile Inc. Ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi kunemibandela yokwamukelwa kwakho nokuhambisana nemigomo, imibandela, izaziso kanye nokuzikhulula okubalulwe ngezansi (“Imigomo Nemibandela”). Kufanele uwafunde manje. Ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi kuyisivumelwano sakho neMigomo Nemibandela.
I-OptiSmile Inc. inelungelo lokuchibiyela imigomo nemibandela nganoma yisiphi isikhathi futhi ngaphandle kokukwazisa. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kwewebhusayithi ngemuva kokuthi noma yikuphi ukuchibiyelwa kuqale ukusebenza kuyisivumelwano sakho sokuhlala futhi uboshwe yimigomo nemibandela, njengoba kuchitshiyelwe kanjalo.
I-OptiSmile Inc. ayiqinisekisi ukutholakala kwezinsizakalo ezinikezwa kule webhusayithi (“Izinsizakalo”) noma ukunemba kolwazi kanye / noma izithombe ezikule webhusayithi. Asenzi izethulo noma amawaranti, noma ngabe avezwa noma ashiwo, futhi asithathi isibopho noma isibopho ngokusebenza kahle kwale webhusayithi kanye / noma nezinsizakalo kanye / noma imininingwane kanye / noma izithombe eziqukethwe kule webhusayithi, futhi izinsizakalo zisetshenziswa ngaleyo ndlela ngokuzibeka wena engcupheni. Ikakhulu, asenzi iwaranti yokuthi Izinsizakalo zizohlangabezana nezidingo zakho, zingaphazanyiswa, zifike ngesikhathi, futhi zivikeleke noma zingabi namaphutha.
Izinketho zokukhokha zamukelwa
Ungakhokha nge-Visa ne-MasterCard ne-Mobicred
Ukutholwa kwamakhadi nokuphepha
Ukuthengiselana ngamakhadi kuzotholwa kwa-OptiSmile nge-PayGate (Pty) Ltd okuyiyona ndlela evunyelwe yokukhokha yawo wonke Amabhange AseNingizimu Afrika Athengayo. I-PayGate isebenzisa indlela eqinile yokubethela, okuyiSecure Socket Layer 3 (SSL3) futhi ayikho imininingwane yeKhadi egcinwe kuwebhusayithi. Abasebenzisi bangaya ku-www.paygate.co.za ukuze babuke izitifiketi zabo zokuphepha kanye nenqubomgomo yezokuphepha.
Imininingwane yekhasimende ihlukile kwimininingwane yekhadi
Imininingwane yekhasimende izogcinwa yi-OptiSmile Inc. ngokuhlukile kwimininingwane yekhadi efakwa yikhasimende kusayithi eliphephile le-PayGate. Ukuthola eminye imininingwane ngePayGate bheka ku-www.paygate.co.za.
Izwe lomthengisi kanye nemali yokwenziwe
Izwe labathengisi ngesikhathi sethula izindlela zokukhokha kumnikazi wekhadi yiNingizimu Afrika. Imali yokwenziwa yiRandi laseNingizimu Afrika (i-ZAR).
I-OptiSmile Inc. ithatha isibopho sayo yonke imikhakha ephathelene nokuthengiselana okubandakanya ukuthengiswa kwempahla nezinsizakalo ezithengiswe kule webhusayithi, ukuxhaswa kwamakhasimende nokwesekwa, ukuxazululwa kwezingxabano nokudilivwa kwezimpahla.
Le webhusayithi ilawulwa yimithetho yaseNingizimu Afrika kanye ne-OptiSmile Inc. ekhetha njenge-domicilium citandi et executandi yazo zonke izinhloso ezingaphansi kwalesi sivumelwano, noma ngabe kuhambisana nenqubo yenkantolo, isaziso, noma eminye imibhalo noma ukuxhumana kwanoma iluphi uhlobo.
Izinsizakalo zomkhiqizo kanye / noma zamazinyo kuwebhusayithi zitholakala kuphela ukuthengiswa kubantu abangenza izinkontileka ezibophezela ngokomthetho.
Inqubomgomo yobumfihlo yekhasimende
I-OptiSmile Inc. izothatha zonke izinyathelo ezifanele ukuvikela imininingwane yomuntu yabasebenzisi. Ngokwenhloso yalesi sigaba somthetho, “ulwazi lomuntu siqu” luyochazwa ngokuthi luchazwe kabanzi kuMthetho Wokukhuthaza Ukutholakala Kokwaziswa 2 ka-2000 (PAIA). I-PAIA ingalandwa ku: http://www.polity.org.za/attachment.php?aa_id=3569.
Ngokuya ngokutholakala nokutholwa kwenkokhelo, izicelo zizocutshungulwa kungakapheli izinsuku ezimbili futhi ukulethwa kuqinisekiswe ngendlela ye-imeyili enenombolo yokubhuka / ivawusha yokubhuka.
Ama-oda kanye nama-aphoyintimenti abhukelwe amasevisi
Noma iyiphi i-oda ebekwe nguwe ngendlela echazwe kule webhusayithi, nanoma yikuphi ukuqokwa okwenziwe nguwe ngendlela echazwe kule webhusayithi kungumnikelo wakho wokuthenga umkhiqizo othile kanye / noma insizakalo yamazinyo ngentengo (kufaka phakathi ukulethwa nokunye izindleko nezintela) ezichazwe kule webhusayithi.
Lokhu kufaka nokukhokhela izinsizakalo kwikhotheshini oyisayine ngokwedijithali ngemuva kokubonisana mathupha noma ngokubonisana ngevidiyo ngethemedicine, ngesikhathi ufaka i-oda lakho kule Migomo Nemibandela. I-OptiSmile Inc. inelungelo lokwamukela noma ukwenqaba okunikezwayo nganoma yisiphi isizathu, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukungatholakali kwanoma yimuphi umkhiqizo kanye / noma insizakalo yamazinyo, iphutha entengo noma umkhiqizo kanye / noma incazelo yesevisi yamazinyo ethunyelwe kule webhusayithi , noma iphutha ku-oda lakho. Inkontileka yakho nathi iba khona kuphela lapho idlulisela phambili isiqinisekiso sokutholwa kwe-oda lakho nenkokhelo
Amanani entengo yomkhiqizo kanye / noma yezinsizakalo zamazinyo nezinsizakalo kanye nokulethwa nezinye izindleko ezikhonjiswe kule webhusayithi zikhona ngesikhathi sokukhishwa kepha zingashintsha nganoma yisiphi isikhathi futhi zitholakala ngokutholakala. Ikhotheshini esayiniwe ngedijithali yokunakekelwa kwamazinyo ongosihlalo izosebenza izinsuku eziyi-14 kuphela kusukela ngesikhathi sokusayina, futhi i-aphoyintimenti izobekelwa wena kuphela, ngemuva kokulandela imiyalelo yenkokhelo kule webhusayithi naku-quotation yakho.
Abakwa-OptiSmile Inc. bazogcina isihloko salo mkhiqizo kanye / noma izinsizakalo zamazinyo ozi-ode kuze kube yilapho usuyikhokhele ngokuphelele leyo mikhiqizo kanye / noma nezinsizakalo zamazinyo, kodwa yonke ingozi kumkhiqizo kanye / noma amasevisi wamazinyo azodlula kuwe lapho zilethwa ukuqoqwa noma ukuqoqwa ngeposi noma ngekhuriya noma ngemuva kokuthola ukwelashwa kwikhotheshini oyisayinile. Kufanele ucabangele ukuthi ungawuthola yini umshwalense ofanele wezinto ezi-odiwe yizithunywa.
Abakwa-OptiSmile Inc. ngeke bathwale icala nganoma yimuphi umonakalo oqondile, ongaqondile, owehlukile, okhethekile noma onomphumela, okuvela ekusetshenzisweni noma ukungakwazi ukusebenzisa iwebhusayithi noma ngezindleko zokuthengwa komkhiqizo obambele kanye / noma nezinsizakalo zamazinyo noma okuvela kunoma yikuphi umkhiqizo kanye / noma izinsizakalo zamazinyo ezithengiwe noma ezitholakele noma imilayezo etholakele noma ukuthengiselana okufakwe kuwebhusayithi noma okuvela ekufinyeleleni okungagunyaziwe kokuguqulwa kokuthunyelwa kwakho noma idatha noma olunye ulwazi oluqukethwe kule webhusayithi, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe, kumonakalo wokulahleka inzuzo, ukusetshenziswa, idatha noma okunye okungaphatheki, noma ngabe selulekwe ngamathuba omonakalo onjalo.
Lapho noma yimuphi umthetho wePhalamende usho eMigomeni Nangezimiso noma yiliphi igama, umbandela noma iwaranti, futhi lowo Mthetho uvimbela noma uvimbela ukuhlinzekwa kwenkontileka okungafaki noma ukuguqula ukusetshenziswa noma ukusetshenziswa, noma isikweletu ngaphansi kwalelo gama, isimo noma iwaranti, lelo gama , umbandela noma iwaranti kuzothathwa ngokuthi kufakiwe kuMigomo Nemibandela, kepha-ke, isikweletu sethu kunoma yikuphi ukwephulwa kwalelo gama, umbandela noma iwaranti sizokhawulelwa, ngokuthanda kwethu, kunoma yikuphi okulandelayo:
uma ukwephulwa komthetho kuphathelene nezimpahla:
ukushintshwa kwezimpahla noma ukulethwa kwezimpahla ezilinganayo;
ukulungiswa kwempahla enjalo;
ukukhokhwa kwezindleko zokushintsha impahla noma zokuthenga izimpahla ezilinganayo; noma
ukukhokhwa kwezindleko zokulungiswa kwempahla; futhi
uma ukwephula lokhu kumayelana nezinsizakalo:
ukunikezwa kwezinsizakalo futhi; noma
ukukhokhwa kwezindleko zokuthi izinsizakalo ziphinde zinikezwe.
Inqubomgomo yokubuyisa nokubuyisa
Sithemba ukuthi uzokujabulela ukuthenga kwakho noma insizakalo. Uma kwenzeka ufisa ukubuyisa noma yini ethengwe kithina, sizojabula ukubuyisa imali noma ukushintshanisa umkhiqizo uma nje usesimweni esigculiseka ngokuphelele. Izimbuyiselo kufanele zenziwe ngesikhathi esingavuseleleka (izinsuku eziyi-7) nasephaketheni lokuqala, elingalimele. Uma sithola ukuthi umkhiqizo kanye / noma insizakalo yamazinyo ayibuyiswanga esimweni esingahleleka ngokuphelele, sinelungelo lokwenqaba ukubuyiselwa imali entweni Uma ubuyisela into ngenxa yephutha ohlangothini lwethu noma ngoba yonakele noma kunesici, sizobuyisa imali ekhokhwayo yokulethwa okuthole leyo nto kuwe bese sikhokha izindleko zakho zokuyibuyisela kithi. Ukubuyiselwa kwemali emsebenzini wamazinyo kulawulwa umthetho kanye ne-HPCSA.
Sinenqubomgomo nenkambiso yenkampani yokuqinisekisa ukuthi konke ukwelashwa okuhlinzekwayo kusezingeni elifanele futhi sizokwenza noma yikuphi ukwelashwa okubhekwa njengokweqile.
Ukuhlinzekwa kwezimpahla nezinsizakalo yi-OptiSmile Inc. kuncike ekutholakaleni. Ezimweni zokungatholakali, i-OptiSmile Inc. izokubuyisela ngokugcwele kungakapheli izinsuku ezingama-30. Ukukhanselwa kwama-oda yikhasimende kuzoheha imali yokuphatha eyi-3%.
Imininingwane enikezwe ngabasebenzi bamazinyo noma i-OptiSmile
Imininingwane nemibono enikezwe udokotela wamazinyo noma i-OptiSmile Employee yenzelwe ukukusiza uqonde ukuxilongwa kwakho ngemitholampilo nohlelo lokwelashwa olunconyiwe. Udinga ukuthi wazi ukuthi isisebenzi sika-OptiSmile esingeyena udokotela kungenzeka singaphenduliswa ngemininingwane enikezwe ngokuthembeka ngokwazi namandla aso kanye nayo YONKE imibuzo ebalulekile mayelana nemiphumela yokwelashwa yangempela, imininingwane yomtholampilo, izinkinga , imiphumela engemihle, ukubikezela, i-warranty expression noma okushiwo, kufanele ibuzwe ngqo ngudokotela ngokubhala / nge-imeyili, kuWhatsApp noma ngokubonisana ngevidiyo okurekhodiwe kanye nalolu lwazi olugcinwe nguwe nodokotela. Lokhu akusetshenziswanga njengokufaka esikhundleni ukuxilongwa okufanele, ukugcinwa kwerekhodi, ukuqonda, kanye nemvume ngudokotela wamazinyo / uchwepheshe / wenhlanzeko.
Ngenkathi sizama ukuhlinzeka ngemininingwane engcono kakhulu nezeluleko ezikhona i-OptiSmile Inc. kanye nabaqeqeshi ababodwa abazibophezeli noma abanikezeli ziqinisekiso maqondana nomphumela.
Yize igama lakho nemininingwane oyinikezwayo lapho ubhalisela ezinye zezinsizakalo kungeke kutholakale kunoma ngubani, kodwa-ke sinelungelo lokwenza imininingwane itholakale kuziphathimandla uma kudingeka ngokomthetho.
Ngeke sithengise noma siqashe noma yiluphi ulwazi olukhomba wena maqondana nomuntu wesithathu. Kodwa-ke, ukuqapha noma ukuqopha imininingwane yakho yokubhalisa kungenzeka ngenhloso yebhizinisi kuze kufike ezingeni elivunyelwe umthetho, njengesibonelo ukulawulwa kwekhwalithi nokuqeqeshwa ngezinhloso zokwenza ngcono izinsizakalo zethu. Kodwa-ke, kulezi zimo, ngeke sidalule imininingwane engasetshenziselwa ukukhomba wena uqobo.
Sizonamathela kunqubomgomo yethu yobumfihlo imigomo ebalulekile etholakala kuyo ukuze uxhume futhi ufunde ekhasini eliyisiqalo lale webhusayithi.
Kufanele usazise ngokushesha uma noma iluphi ulwazi lwakho lushintsha.
Uyavuma ukuthi singabanini bamalungelo obunikazi bokusungula kule webhusayithi nakuyo le webhusayithi nokuthi ukusetshenziswa kwayo okungagunyaziwe akuvumelekile. Igama noma uphawu “OptiSmile”, nokho, lumelwe, kufaka phakathi ukumelwa kwesitayela, onke amalogo ahambisana nawo nezimpawu kanye nokuhlanganiswa kwanoma yikuphi kwalokhu okungenhla nelinye igama noma uphawu, elisetshenziswe kulengosi, yizimpawu zokuhweba ezibhalisiwe ze-OptiSmile.
Uzogcina iphasiwedi yakho ivikelekile futhi uqinisekise ukuthi akekho omunye umuntu ozosebenzisa Izinsizakalo esebenzisa iphasiwedi yakho, futhi uyavuma futhi ukuthi unesibopho sokuqinisekisa ukuthi akukho ukufinyelela okungagunyaziwe Kwezinsizakalo okutholwa usebenzisa iphasiwedi yakho nokuthi uzobophezeleka kubo bonke imisebenzi enjalo yenziwa ngokulandela ukusetshenziswa okunjalo, noma ngabe kugunyaziwe noma cha.
Sinelungelo lokunqamula le Misebenzi kuwe, noma emphakathini uwonke, ngaphandle kwesaziso noma isizathu, noma ukubuyekeza le migomo nemibandela nganoma yisiphi isikhathi. Izinguquko ezinjalo zizothunyelwa kule webhusayithi futhi kuzothathwa njengezamukelwe nguwe uma uqhubeka nokusebenzisa Izinsizakalo. Isibopho, ngakho-ke, sikuwe ukuthi ubuyekeze le migomo nemibandela ngezikhathi ezithile.
Le migomo nemibandela izolawulwa futhi ichazwe ngokuhambisana nemithetho yaseNingizimu Afrika.
Le migomo nemibandela iyahlukaniswa, ngokuthi uma noma yimuphi umbandela unqunywa ukuthi awukho emthethweni noma awuphoqelelwe yinoma iyiphi inkantolo yendawo efanele, lokho kuhlinzekwa kuzothathwa ngokuthi kususiwe ngaphandle kokuthinta izinhlinzeko ezisele zemigomo nemibandela.
Ukwehluleka kwethu ukusebenzisa noma yimaphi amalungelo akhethekile noma ukuhlinzekwa kwale migomo nemibandela ngeke kube ukuyekelwa kwalelo lungelo noma ukuhlinzekwa, ngaphandle kokuthi kuvunyelwe futhi kuvunyelwane nathi ngokubhala.
Le migomo nemibandela, njengoba yehluka kithi ngezikhathi ezithile futhi yakha isivumelwano sodwa phakathi kwakho nathi
Le webhusayithi iphethwe yi-OptiSmile Inc. inkampani ezinze eNingizimu Afrika ehweba njenge-OptiSmile Dental and Implant Specialists enenombolo yokubhalisa ka-2015/263716/21. UMqondisi uClifford Yudelman.
Inkampani engu-OptiSmile Inc.
Suite 303 IPhoyinti Mall
ISea Point, eKapa, ​​eNingizimu Afrika
I-Tel: 087 702 6886